Ambatofinandrahana: fiara mpitety tsena voatafika, olona roa natao takalon’aina | NewsMada
Ambatofinandrahana: fiara mpitety tsena voatafika, olona roa natao takalon’aina
Miseho lany hatrany ny fanafihana any amin’ny faritra any. Fiara iray mpitety tsena, notafihan’ny dahalo tany Ambatofinandrahana, ny asabotsy teo. Tsy vitan’izany, lasan’ny dahalo nataony takalon’aina ny olona roa, vola antapitrisany voaroba. Tokony ho tamin’ny telo ora sy sasany tolakandro, tao Ibodana, nisehoan’ny fanafihana ka fiarabe avy namonjy tsena tao Ambatofonandrahana hody any Ambositra no voatafika, tamin’ny fiakarana an’ i Belanitra, 10 km miala an’Ambatofinandrahana tampon-tanàna.
Fantatra fa notifirin’ireo mpanakan-dalana ny fitaratra nanandrify ny saofera, tsy afa-nihetsika intsony ilay kamiao. Nanaram-po ireo dahalo nitam-basy nandroba ny entana tian’izy ireo. Izay tsy zakan’ireo dahalo, naparitany nanerana ny lalana sy tampon-tanety.
Nandritra ny fitsoahana ihany koa no nakan’izy ireo olona roa tao amin’ity fiara voatafika ity. Natao takalon’aina ny zazalahikely efatra taona sy tovovavy 16 taona mpanampy mitaiza ilay zaza zanaky ny tompon’ny fiara.
Tonga teny an-toerana ny zandary ary efa manao ny fikarohana ireo dahalo nitondra ireo ankizy roa nitsoaka. Ity resaka fakana takalo’aina ity , efa zary fanaon’ny dahalo rehefa manafika. Avotsotr’izy ireo ihany izy ireny rehefa lasa lavitra. Anisan’ny mampitaraina ny olona any amin’ny faritra izany. Tsy voafehy ny tsy fandriampahalemana…